cluster fuck - ဝစ်ရှင်နရီ
cluster fuck (အများကိန်း cluster fucks)
အရာရာတိုင်းက အမှားတွေဖြစ်လို့ ကသောင်းကနင်း အခြေအနေရောက်ခြင်း။မစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ အဆက်အသွယ်ကျခြင်း၊ (သို့) ရှုပ်ထွေးသော ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် မကြာခဏဖြစ်ရခြင်း။(ဗန်းစကား, chiefly military, vulgar) A chaotic situation where everything seems to go wrong. It is often caused by incompetence, communication failure, oracomplex environment.
စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို သူဘာထင်ခဲ့သည်ကို မေးမြန်းခဲ့ရာ - သေနာငတိက သောက်ရမ်းဗရုန်းသုန်ကားတွေဖြစ်ကုန် လို့တုန့်ပြန်လိုက်၏။ When asked how he thought the military exercise went, Chief-of-Staff responded, "It'sacluster fuck. ".
cluster fuck (third-person singular simple present cluster fucks, present participle cluster fucking, simple past and past participle cluster fucked)
Military planners of Yangon War Office cluster fucked the whole military operation against Gunhtang Gam Shawng in Kachin State.
"https://my.wiktionary.org/w/index.php?title=cluster_fuck&oldid=677146" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၇၊ ၀၁:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။